Mombamomba ny orinasa - Shandong Nisen Trade Co., Ltd.
Shandong Nisen Trade Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny tanàna lohataona mahafinaritra ---- Jinan.
Orinasa iray izy io, izay manolotra ny mpamatsy vahaolana mpikirakira varavarankely tokana.
Nisen dia orinasa mirotsaka amin'ny R&D, famokarana, fivarotana milina fanamboarana varavarankely & aliminioma, tsipika famokarana fitaratra fitaratra ary fitaovana am-baravarankely sns.
"Manome loka ny mpanjifa amin'ny kalitao, mandroso miaraka amin'ny fiarahamonina, mihalehibe amin'ny mpanjifa, manatsara ny ekipa" No fototra izay mampihatra ny fitantanana ny Shandong Nisen Trade Co., Ltd. amin'ny lafiny rehetra.
Manome vokatra sy serivisy avo lenta izahay miaraka amin'ny sandan'ny vola, manana traikefa lehibe momba ireo voakasik'izany. Fantatra amin'ny rafitra rafitra fitaratra am-baravarankely sy varavarankely izahay.